''Bu’aa Bayii Qabsoo uummata Oromoo Siirna garbuamaa irraa gara Bilisummaatti''
Getachew Jigi Demekssan'
Kitaabni kun qabiyyee kallattii hedduutiin kan guutedha. Kan barreeffames akka lakk. Awurooppaatti bara 2007 dha. Kaayyoon Kitaaba kanaa inni guddaan hacuuccaa, roorroofi hammeenya saba Oromoo irratti raawwatame waggaa 130 olii gadi fageenyaan xiinxalee sabichaaf ifa gochuudha. Kitaabonni kana dura sinoota Nafaxanyaatiin kijiba dawoo godhatanii sammuu dhaloota qubee kana nujalaa booressan marti akka toora sirrii qabatuufani itti yaadee barreesse. Dhaloonni ammaa kun dammaqaa waan jiruuf lammata akka wanjoo nafaxanyaatiin hinqabamnes abdii waanan qabuufi. Kana booda Oromoo luugamuun hindanda'amu. Oromoon utuu haala mijataa eeguu kunoo bara 2014 gahee jira. Waggaa torba fuula dura kan raawwatamanillee bal'inaan kitaaba kana keessatti kaafamaniiru. Qabiyyee hedduu aammachiisuu waanan barbaadeefan kitaabni kun gara fuula 900 ol ta'e. Qabiyyeen kitaaba lammaaffaaf kaa'amn malee kan qophaa'an fuula 1500 ol ta'u.
Ani gamakootiin akkan xiinxalee jirutti siyaasni Nafxanyootaafi oduun ETV % 90 ol dhugaa irratti kan hin hundoofnedhan jedha. Ragaa sobaa Nafxanyoonni barreessan maqaa Waaqa isaaniilee dhahaniitu seenaa sobaa Oromoorra tuulan. Nafxanyoonni kitaabota isaanii maddi dhara ta'e sana barreessuu keessatti uummata Oromoo maqaa xureessaa, balleessaa turan. Kanaaf ammoo barruun isaanii ''RAA' MAARIYAAM'' jedhu Oromoo dabalatee saba cunqurfamaa biyya Itoophiyaa keessa jiru hunda kan arrabsedha. Barruun kun ammayyuu jira. Soba kanammoo saaxiluun dirqama natti ta'ee jira. Kana booda uummanni Oromoo Seenaa faaltii abashootaatiin gowwoomfamuu hindanda'u.
Kitaabni guddichi kun kutaa gurguddoo afur kan of jalatti qabiyyee hedduu qabuutiin qindaa'e. Kutaa Jalqabaa keessatti, Xiyyeeffannoonsaa guddaa rakkoo uummata Oromoorra ture ifa baasuudha. Sirnoonni abashootaa moofaan Tiwoodiroos, Yohaannis, Minilikiifi Haayilesillaasee keessatti Oromoon akkamiin akka cabetu ibsame. Sirni abbaa lafaa qabsaa'otaafi gootota Oromootiin gaggalalaglus ammayyuu sirni Nafxanyootaa waan mumul'achaa jiruuf Warra sirna moofaa sana duuba deebi'anii tuttuquu barbaadan sana dhabamsiisuuf yaada kennametu qindaa'e.
Kutaa lammaffaa keessatti ammoo gocha sirni Wayyaanee yakka Suukkaneessaa, ajjeechaa qaroo Oromoo ol adeemtotarratti taasistee jirtutu ifa baafame. Saamicha qabeenyaa Oromoo irratti taasifames saaxiluuf yaaleera. Akkasumas filannoo bara 2005/1997 keessa ta'iiwwan duguuggaa sanyii taasifametu barreeffame. Wayyaaneen seenaa dhala namaa booressuufi keessumattuu qaroo Oromoo dhabamsiisurraatti gocha isheen taasiftetu dhaloonni akka beekuu qabuuf barreeffame. Dhaloonni kun ammayyuu itti fufee barreessaa jira. Kanaafan gocha Wayyaanee gadifageenyaanan ibse.
Kutaa sadaffaa keessatti ammoo hanqinoota beekumsaafi dandeettii dhabuurran kan ka'e miidhama guddaa waajjiroolee Oromiyaa keessatti argamantu xiinxalame. Rakkoo qofa utuu hintaane falas duukaa eeruuf yaaleera. Kanaafis dargaggoonni, hawaasniifi qaamni baratee jiru maal gochuu akka qabutu ibsameera.
Kutaan arfaffaan ammoo bara uummanni Oromoo hiree ofiisaa ofiin murteeffatutti maal gochuu akka qabutu gadi fageenyaan ilaalame. Kana keessattis, Jireenya uummata Oromoo akkamiin akka fooyyeessuu qabnu, gaheen hayyoota Oromoo amma burqaa jiran kanaa maal akka ta'e, Oromiyaafi Oromoo guddatee addunyaarratti beekamtii argatu akkamiin ijaaruu akka qabnuufi waan Oromoon qabu mara qorannoodhaan deggaruun akka mul'isuu qabnun lafa kaa'e.
Walumaagalatti, kitaabni kun kan abbaa seenichaa kan OROMOOti. Kan seenaa kana nabarsiises muuxannoofi mudannoo ani uummatakoo keessatti argadhe wan ta'eef abbummaan kan saba guddichaati. Kanaafuu sabni bal'aan kun ergaa guutummaa kitaabicha keessatti argamuu dubbisee xiinxaluun yaada ijaarsaa, qeeqaafi kallattii qorannoo birootiif ka'umsa akka ta'uuf kan itti yaadamedha. Ani akka barreessaa kitaaba kanaatti nama dhuunfaa yookaan dhaaba kamuu jeequuf yookaan balleessuuf utuu hintaane, qaamni kamuu dogoggora jiru mara sirreeffatee Oromoo garbummaa jalaa akka baasuuf malee. Oromoon walhubachuu qabna. Garaagarummaa ilaalachaa hedduu yoo qabaannes maddi keenyaaf galmi hawwii keenyaa tokkuma. Kanaafuu kanaan boonuu qabna. Tumsa nurraa eegamu maras taasisuu qabna. Ammas seenaan keenya dhokateefi ukkaamfamaa ture ifa ba'uu qaba. Dargaggoonni amma ka'aa jiran; keessumattuu dhalootni qubee haqni isaan bobeessaa jiru jajjabeeffamuufi kunuunfamanii nuuf guddachuu qabu. Gola seenaan hinseenne hinjiru yaa uummata Oromoo.